Nhau - Ndeupi iwo akakodzera makorari muchina iwe
Ndeipi iri kurudyi makorari muchina iwe?
Mazuva ano, kune akawanda mabhureki emuchina wekupukuta mumusika, asi iwo anowanzo gona kuganhurwa mumhando nhatu, dzinova dzinodzora polisera, mbiri-chiito kupora, uye kumanikidza kutenderera da polisher.
Rotary polisera muchina wekupukuta uyo unoshandisa chete 1 mhando yekufamba kuti igadzire polishing. Iyo yakanaka kwazvo pakucheka, inoshanda nekukurumidza, asi zvakare inoda yakawanda ruzivo uye ruzivo rwekushandisa nemazvo.
Yechipiri chiito polisher inoshandisa denderedzwa inofamba pamwe chete nekutenderera inofamba kuti ive nehungwaru kaviri chiito. Kufambisa uku kunobatsira kana uchikwenya pasi nemuchina. Iyo mbiri yekuita polisher inozivikanwa nekuve nyore kushanda nayo, ichiita kuti ive yakanaka kune vanotanga.
Yekumanikidza kutenderera polisher ndiko kusanganiswa kweiyo rotary uye maviri-chiito maficha.
Ichowo chiito chekuita polisera, kutenderera munzira dzakasiyana, nekudaro uchigovera yakawanda yehuni pamusoro pependi, ichiita kuti ive yakachengeteka kupfuura yekupukuta inotenderera. Asi hazviregi kutenderera kunyangwe hazvo pasiforce iwe yaunoshandisa ichienzaniswa neyechipiri-chiito polisher. Zvese mune zvese, kumanikidzwa kutenderera kunopa iri nani yekucheka chiito ichienzaniswa neDA, asi yakachengeteka mota inotsanangudza ichienzaniswa neiyo rotary.
Sarudza iyo Dual Action Polisher kana:
1.You uri mutsva kuti muchina makorari;
2. Iwe unoda chimwe chinhu chiri nyore kushandisa;
3.Iwe unoda kutora mashoma swirls uye mwenje kukwenya kubva kwako pendi pendi;
4.Iwe unongotarisira mota yako wega kana mota dzemhuri yako;
5.Iwe uri kutsvaga yakachengeteka, asi ine simba mota kupolisha;
6.Iwe unoda kuishandisa nguva dzose kuti uchengetedze pendi yako;
7.Iwe unoda kutanga chikamu-chenguva-kana izere-izere rinotsanangura bhizinesi;
8 Uri kutsvaga chishandiso kuti uve nechokwadi chekumhanya-kusingagumi kupera;
9.Boats/RV kana varidzi vendege vari kutsvaga nzira iri nani, inokurumidza, uye yakachengeteka yekuchengetedza zvikepe zvavo / maRV / ndege.
Sarudza Kumanikidzwa Rotation DA Polisher kana:
1. Uri kutsvaga yakachengeteka, asi ine simba kupora.
2.Iwe uri mutsva kumuchina kupora asi unokwanisa kudzidza nekukurumidza;
3.Wakashandisa zviito zviviri polishers uye wagadzirira nhanho inotevera;
4.Iwe unoda kuti mhedzisiro iwanikwe kubva kune rotary nekuchengeteka kwese kweDA!
Sarudza Rotary Polisher kana:
1.Une zvakakomba mapendi ekupenda iwe aunonyatsoda kubvisa;
2.Une imwe nguva yekusvika pakubata nemushini mashandiro
3.Une bhizinesi rinodudzira iro rinoda kuwedzera chishandiso chine simba.
4 Unoda kuve nyanzvi yekutsvagisa;
5. Iwe unofarira uyo akagona rimwe kana anopfuura mamwe mapoka ezvishandiso uye ikozvino wagadzirira kuenda kune iyo rotary polisher.